SellerSmile: Gịnị kpatara ị ga-eji wepụta otu Nkwado Ecommerce gị | Martech Zone
Mgbe ọrịa na-efe efe malitere ma mechie ndị na-ere ahịa, ọ bụghị naanị na ọ metụtara ụlọ ahịa ndị na-ere ahịa. Ọ metụtara usoro ọkọnọ niile na-enye ndị na-ere ahịa nri nri. Nkem ụlọ ọrụ na-ahụ maka mgbanwe mgbanwe dijitalụ na-arụ ọrụ na onye nrụpụta ugbu a iji nyere ha aka n'ịwupụta Ecommerce ha na Martech stack iji kwado a azụmahịa mbupu mmiri ozugbo na ndị ahịa. Ọ bụ ọrụ siri ike dịka anyị siri nwee ike ịrụ ọrụ niile site na nyocha na imepụta ika, site na njikọta ngwa agha.
Maka ika ọhụrụ ịbanye ụlọ ọrụ a adịghị mfe. Anyị dụrụ ha ọdụ na ha ga-enwerịrị atụmatụ kacha mma n'ọnọdụ:
ngwaahịa - Nke a bụ ihe dị iche ha ebe ọ bụ na ha na-emepụta ma na-emepụta ejiji ruo ọtụtụ iri afọ. Ha amaraworị ihe na-ere yana ahịrị ngwaahịa ndị ọzọ chọrọ ka ewepụtara.
Ahụmahụ onye ọrụ - anyị maara na mmejuputa e-commerce ha kwesịrị ịbụ nke kachasị mma, yabụ anyị etinyela saịtị ahụ Zụọ ahịa Gụnyere ma tinye n'ọrụ nke ọma na-akwado na isiokwu Shopify kachasị ịrụ ọrụ site na.
Mbupu na nloghachi - Mbupu n'efu dị oke mma, mana ịnwe akpa nloghachi emebere maka ihe chọrọ iweghachi dị oke mkpa.
Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịa - ikpeazụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, inwe otu nkwado iji nyochaa email, ekwentị, na mgbasa ozi ọha na eze iji mee ka ihe dị mma maka onye ahịa ga-adị oke egwu.
Onye ahịa a enweghị akara edobere, yabụ, a ga-ewepụtarịrị usoro ndị a n'otu oge. Nke ahụ dị mfe maka ngwaahịa, ahụmịhe, na mbupu… mana kedu ka ị ga-esi malite otu ọrụ ndị ahịa? Ọfọn, ị kwesịrị ị na-eme ihe n'eziokwu outsource ya.
Gịnị kpatara e ji enweta nkwado n'èzí?
Ndị otu nkwado sitere n'ike nwere ahụmịhe na-enweghị atụ nke ga-agbakwunye uru na ika gị. Uru nke ịchụpụ otu gị gụnyere:
Belata ụgwọ ọrụ nke iwere ndị ọrụ ma ọ bụ otu VA. Ọnụ ahịa mgbanwe na ahaziri ahaziri. Enweghị ọrụ, enweghị ụgwọ zoro ezo.
Mkpuchi na-enweghị nchekasị ụbọchị asaa kwa izu. Ịnweta otu ndị ọkachamara na-ahụ maka ọrụ ndị ahịa na-enweghị ike ịkpọ, zụọ na jikwaa.
Zụlite ahịa gị site na iji atụmatụ ahụmịhe ndị ahịa zuru oke nke data sitere na nzaghachi ndị ahịa mara.
Ndị ahịa gị ga-enweta ahụmịhe ịzụ ahịa n'ịntanetị kachasị mma site n'aka ndị otu na-asụ asụsụ dị iche iche nwere ụtọasụsụ pụrụiche na oge nzaghachi ngwa ngwa.
Ọrụ Smile Seller
Ọchị ọchị bụ onye ndu n'ime ụlọ ọrụ nkwado ecommerce na-apụ apụ. Ha na-akwado bụ Shopify Partner ma na-akwadokwa ebe ahịa gụnyere Amazon, Overstock, Etsy, Ebay, Sears, Walmart, na Newegg. Nkwado izizi gụnyere:
email Nkwado - Ma mkpa mkpuchi gị bụ ụbọchị 7 n'izu, izu ụka ma ọ bụ ezumike, SellerSmile na-enye ndị ahịa gị nkwado n'ahịa ahịa e-azụmahịa na ụlọ ahịa weebụ.
Nchịkwa nchịkwa – Ntụle ọha na-adịghị mma na nkwupụta bụ akụkụ nkịtị nke ịzụ ahịa n'ịntanetị mana nkọwa dị oke egwu na-achọghị nwere ike gbasaa ngwa ngwa. Ọrụ nlekọta aha ha na-ahụ na a na-ejikwa nzaghachi ika gị.
Live Chat Nkwado - Ịnye nkwado nkata ndụ maka ndị ọbịa webụsaịtị gị bụ uru dị mkpa asọmpi nke na-eme ka ọdịiche dị n'etiti gị na ndị na-ege gị ntị nwee ntụkwasị obi site na enyemaka ngwa ngwa na nke ndị ọkachamara ọrụ.
Ọzọkwa, Ọchị ọchị nwekwara ike ịnye:
Nkwupụta na ndụmọdụ - Akpọkọ ahaziri kwa ọnwa na atụmatụ atụmatụ oge site na onye njikwa akaụntụ gị iji nyochaa isi ihe, ihe omume na nghọta enwere ike ime.
Ndụmọdụ ndị ahịa - Ị na-achọ ịkwalite otu nkwado gị? SellerSmile na-arụkọ ọrụ iji nyochaa nhazi, akwụkwọ na atumatu gị dị ugbu a wee chepụta atụmatụ maka ịga nke ọma.
Nkwado mgbasa ozi ọha - Njikwa obodo iji nye ndị na-azụ ahịa ahụmịhe enweghị nkebi na Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn na ndị ọzọ.
Njikwa FAQ - Mee ka ọ dị mfe ịchọta azịza ziri ezi nke ajụjụ a na-ajụkarị ngwa ngwa. Ebe ihe ọmụma ọha na-enye onwe gị bụ ebe ndị ahịa ga-ebu ụzọ nweta enyemaka ha chọrọ.
Nyochaa mkpesa - SellerSmile nwere ike iji aka hazie nyocha ngwaahịa gị kwa ụbọchị iji kpughee ohere ndị dị mkpa maka nrụgharị ngwaahịa na ihe omuma mgbakwunye.
Ọ bụrụ na ị ga-achọ ịmalite nkwado ndị ahịa iji kwalite ahụmịhe ndị ahịa ka mma yana ahịa ndị ọzọ:
Gbalịa SellerSmile n'efu maka ụbọchị 7
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọta anyị maka Ọchị ọchị ke ibuotikọ emi.
Tags: Amazon nkwadoahụmahụ ahịaahịa nkwadonkwado email ecommercenkwado ecommercenkwado emailNkwado EtsyNkwado Neweggnkwado ecommerce outsourcenkwado outsourcenjikwa ahaonye na-ere ereụlọ ahịaShopify gbakwunyere nkwadoNkwado ShopifyZụọ ahịa isiokwuazụmahịa azụmahịaọrụ ndị ahịa soshal midiaecommerce mmekọrịta mmadụ na ibe yanjikwa elekọta mmadụelekọta mmadụ media aha njikwaosisi ohiaNkwado Walmartwokiee